शिक्षामा युद्धको अन्त्य- विविधा - कान्तिपुर समाचार
डा. अला मुराबिट
शिक्षामा युद्धको अन्त्य
द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा हिंसाका कारण ८ करोड बालबालिकाको शिक्षामा असर परिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘हरेकका लागि सबै ठाउँमा शिक्षा’ प्रति पुन: प्रतिबद्ध हुनैपर्ने भएको छ ।
चैत्र २५, २०७४ डा. अला मुराबिट
काठमाडौँ — मेरी तीन वर्षीया भतिजी ‘असल मानिसहरू’ को शक्तिमा बलियो विश्वास गर्छे । कहिलेकाहीँ म ऊकहाँ पुग्दा मलाई तानेर आफ्नो कोठाको किताब राख्ने दराजतिर पुर्‍याउँछे र एकपछि अर्को पुस्तक निकालेर देखाउँछे । ती सबै पुस्तकको एउटै निष्कर्ष हुन्छ– युद्ध ठूलो होस् वा सानो, सदैव सत्यको जित हुन्छ ।
तर उसलाई वास्तविक संसारमा सफेद झगडा र सन्तुष्ट परिणामहरू अपवाद हुन् भन्न म सक्दिनँ । आधुनिक युद्धले कुनै नियमहरू पालन गर्दैन र बफादारहरू कहिल्यै श्यामश्वेत छैनन् । मेरा लागि, यो सत्यलाई विद्यालय र शिक्षकहरूमाथि लक्षित बढ्दो हिंसाले जति भयानक कुनै पनि कुराले चित्रण गर्दैन ।
यस वर्षको मे महिनामा शैक्षिक क्षेत्रलाई आक्रमणबाट सुरक्षित राख्ने विश्वव्यापी गठबन्धनले ‘आक्रमणमा शिक्षा’ सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै छ । उक्त प्रतिवेदनले विगतको कुनै पनि समयमा भन्दा हाल युद्ध र सैन्य संलग्नताले शिक्षालाई बढी प्रभावित पारिरहेको पुष्टि गर्छ । यो तथ्यांक वास्तवमै अपत्यारिलो छ । विश्वभर हिंसाका कारण करिब ८ करोड बालबालिका विद्यालय जान वञ्चित छन् । सन् २०१७ को पहिलो ६ महिनामा २० देशका विद्यालयमा ५ सयभन्दा बढी आक्रमण भए जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै बढी हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार १५ देशमा सरकारी सैनिक वा विद्रोही समूहले सैन्य प्रयोजनका लागि विद्यालयहरूमा नियन्त्रण कायम गरेका थिए । विद्यालय वा शिक्षकलक्षित आक्रमणमा संलग्न वा सहयोग पुर्‍याउने जुनकुनै सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनैपर्छ । हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य बालबालिका यसै पनि पीडित छन् । तर जब हिंसाले उनीहरूलाई लेखपढ गर्न बाधा व्यवधान पुर्‍याउँछ, उनीहरू दोहोरो पीडा खेप्न बाध्य हुन्छन् ।
युद्धले बालबालिकाको शिक्षाको जरा कसरी पूर्ण रूपमा उखेलिन्छ भन्ने मनन गर्न सिरियाको उदाहरण हेरौं । हालको द्वन्द्वभन्दा पहिले सिरियामा प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको दर ९० प्रतिशतभन्दा बढी थियो तर आज, अधिकांश क्षेत्रमा भइरहेको लडाइँको प्रभावले त्यो ३० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । यमनमा युद्ध र अनिकाल बढ्दै गएको छ । ६ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका २० लाखभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय जना वञ्चित छन् । सिरिया, गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान र जोर्डनमा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सञ्चालित ७ सय विद्यालयमध्ये आधामा कम्तीमा एकपल्ट हालसालै आक्रमण वा बन्द भएका छन् ।
मानवीय संकटले अक्सर राजनीतिक इच्छाशक्तिमा वृद्धि गराउँछ । अरूको, खासगरी बालबालिकामाथिको अनावश्यक पीडाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई त्यसको अन्त्यका लागि पहल गर्न पैसा र ऊर्जा समर्पण गर्न बल पुर्‍याउँछ । दुर्भाग्यवश, त्यस्तो उदारता युद्धग्रस्त क्षेत्रमा शिक्षाको समर्थनका लागि कमै हुने गरेको छ । संसारभर विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने करोडौं बच्चामध्ये हरेक ४ मा एक जना संकट प्रभावित देशमा छन् । यद्यपि, मानवीय सहयोगको ३८ प्रतिशत शैक्षिक क्षेत्रको आपत्कालीन सहायताका लागि अनुरोध गरिएको त्यसको निकै कम अर्थात् २ प्रतिशत मात्र प्राप्त हुने गरेको तथ्यांक छ । सन् २००० को अप्रिलमा जब ‘डकार फ्रेमवर्क फर एक्सन’ अपनाइयो, तब संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासमध्ये एक ‘सबैका लागि शिक्षा’ को लक्ष्य प्राप्त गर्न द्वन्द्व मुख्य बाधक भएको निष्कर्षमा हस्ताक्षरकर्ताहरू पुगे । प्रतिवेदनले सम्भव भएसम्म सरकार तथा नागरिक समाजका समूहहरूले विनाशकारी वा क्षतिग्रस्त शिक्षा प्रणाली पुनर्निर्माण गर्न जुट्ने सहमति पनि गर्‍यो तर सहमतिमा हस्ताक्षर भएको झन्डै दुई दशक हुँदा पनि पुनर्निर्माणको प्रतिबद्धता किन निरन्तर बेवास्ता भइरहेको छ त ?
द्वन्द्वका कारण प्रभावित परिवार तथा देशको पुन:उत्थानका लागि एक मात्र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र नै शिक्षा हो । प्रत्येक वर्षको अतिरिक्त शिक्षाले हरेक व्यक्तिको आम्दानी औसतमा १० प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ जसका कारण उनीहरूको दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरतामा सुधार हुन्छ र हिंसामा फर्किने जोखिम कम गर्न मद्दत पुग्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, शिक्षामाथिका आक्रमणहरू वास्तवमै हाम्रो सामूहिक भविष्यमाथिकै आक्रमण हुन् ।
द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा छात्रको तुलनामा छात्राहरूले साढे दुई गुणा बढीले विद्यालय शिक्षा छाड्ने गरेको देखिन्छ । छात्राहरूमा लगानी गर्नु लामो समयसम्मका लागि फाइदाजनक छ किनकि उनीहरूले नै समुदायलाई बदल्न तथा गरिबी निर्मूल पार्न सक्छन् । शिक्षित केटीहरूले युवाअवस्थामै विवाह गर्ने सम्भावना कम हुन्छ अनि उनीहरूका थोरै र स्वस्थ छोराछोरी हुने सम्भावना निकै बढी हुन्छ । यसबाहेक, महिलाले आफ्नो आम्दानीको ९० प्रतिशत समुदायकै लागि खर्चन्छन् ।
हिंसाग्रस्त तथा भर्खरै हिंसा अन्त्य भएका देशहरूले पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्दैगर्दा विद्यालय निर्माणका लागि आर्थिक क्षमता नहुन सक्छ । त्यसकारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग धेरै महत्त्वपूर्ण छ । विश्व समुदायले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा शिक्षाको पहँुच सुधार गर्न चाहिने २ खर्ब ३ अर्ब अमेरिकी डलर तत्काल जुटाउन आवश्यक छ । साथसाथै, दाताहरूले द्वन्द्वको मनोवैज्ञानिक त्रासमा परेका बच्चालाई मद्दत पुर्‍याउने संस्थाहरूको स्थापनामा पनि जोड दिनुपर्छ । द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा धेरै बच्चाका लागि मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक समर्थन पनि शैक्षिक अवसरका रूपमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
हरेक संघर्ष २० पानामा संक्षेपीकरण गरिएका र सुखद अन्त्य भएका मेरी भतिजीका चित्र पुस्तकहरूको संसारजस्तो वास्तविकता हुँदैन । तर, ईश्वरीय माता वा परीको अनुपस्थितिमा संसारलाई व्यावहारिक समाधान आवश्यक हुन्छ, जुन असल मानिसले पूरा गर्न सक्छन् । हरेक बच्चालाई शिक्षित बनाएर हामी संसारलाई कम आततायी बनाउन सक्छौं । (प्रोजेक्ट सिन्डिकेट) डा. मुराबिट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवद्वारा नियुक्त विश्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्यका वकालतकर्ता, राष्ट्रसंघीय स्वास्थ्य रोजगार र आर्थिक वृद्धि उच्चायुक्त हुन् ।
प्रकाशित : चैत्र २५, २०७४ ०८:४५
‘बिचरा’ पुरुष !
म बारम्बार सोच्ने गर्छु, ‘साँच्चै वर्षौंदेखि पुरुषलाई खेतबारीमा जोत्ने गोरुजस्तो बनाइएको तथ्य सबै पुरुष जातिलाई थाहा होला कि नहोला ?’
चैत्र २५, २०७४ शीतल दाहाल
काठमाडौँ — भर्खरै मेरो एक केटा साथीको बिहे भयो । उमेरले ३५ नाघेका ती साथीकी बेहुलीको उमेर भने २२ वर्ष अर्थात केटा र केटीको उमेरमा १३ वर्षको अन्तर ।
विवाह समारोहको म सामान्य जन्ती थिएँ । उमेरले साढे तीन दशक काटेको भएर होला, निधार र गालामा देखा परेको चाउरीले बेहुलाको सुन्दरतामा ह्रास आएको थियो । कानको छेउछाउमा देखा परेका सेता कपालले केटो झनै परिपक्व देखिन्थ्यो तर उसको तुलनामा केटी भने एकदम कोमल देखिन्थिन् । शारीरिक व्यायाम नभएर हो वा दौरासुरुवाल साँघुरो भएर, दुलाहाको पुट्ट परेको भुँडीमा जन्तीका आँखा बारम्बार एकोहोरिएको अन्दाज सबैले गरे । यस्ता जोडा नमिलेको दुलादुलहीको बिहे बारम्बार देख्न पाइन्छ जब हाम्रोतिर बिहेको लगन सुरु हुन्छ । हुन त मन मिले खासै फरक पर्दैन ।
तर हाम्रो समाजमा बिहे गराइँदा मनसँग मन मिलाइन्न । बरु जात, गोत्र, वर्ग, धनसम्पत्ति हेरेर बिहे गरिन्छ/गराइन्छ । सम्पत्ति र जातमा चित्त बुझे मन नमिले पनि बिहे हुन्छ । जात र गोत्र मिलेकै आधारमा अनमेल लगनगाँठो कसिएका हजारौं उदाहरण हाम्रा अघि छरपस्ट छँदै छन् ।
यो लेख तयार पार्दा म बारम्बार त्यही मेरो केटो साथीलाई सम्झिरहेछु । अब ऊ मरेरै भए पनि नवविवाहिताको रहर पूरा गर्न लागिपर्छ । सम्भवत: चाँडै जन्म लिने बालबच्चाको रहर पूरा गर्न ऊ कसिन्छ । शारीरिक मात्र होइन, मानसिक सबैजसो श्रमको उचाइमा अब उसले पाइला टेक्नैपर्छ । ऊ जागिरे हो भने हाकिम रिझाउनैपर्छ, ऊ सुरक्षागार्ड हो भने खुट्टाको जुत्ता फाट्ने गरी ‘सल्युट’ ठोक्नैपर्छ । सिपाही भए बन्दुकको नालमा निदाउनैपर्छ । किसान हो भने खेतबारीमा भिड्नैपर्छ । ऊ मजदुर हो भने पसिनाको आहालमा डुबेर भारी बोक्नैपर्छ । पुरुषले नै अगुवाइ लिएको यो समाज पुरुष जातिसँग यति अनुदार छ कि कुनै दिन वा कुनै पल उसलाई सार्वजनिक रूपमा धक खुलाएर रुनसमेत दिँदैन ।
ऊ घरमूली हो । उसलाई सदियौंदेखि त्यही स्थान दिइएको छ । वंश, गोत्र, थर या परिवारको मूल जिम्मेवारी उसैले कायम राख्नुपर्छ । तैपनि के त्यस्तो तत्त्व छ पुरुषसँग, ऊ प्राय: हार मान्दैन । यही आलोकमा म ऊ मात्रै होइन, प्राय: समाजका पुरुषलाई ‘बिचरा’ देख्छु । किनभने मसँग केही यस्ता तथ्य छन्, जसलाई नियालेर हेर्दा ती बिचरा नै देखिन्छन् । यसलाई अन्यथा अर्थ नलगाइयोस् ।
मलाई पुरुषविरोधीका रूपमा व्याख्या नगरियोस् । म जान्दछु, अर्बौं प्राणीमध्ये एक पुरुष प्राणीकै कारण मैले पनि यस धर्तीमा जन्म लिन पाएकी हुँ । मलाई यस्तो लाग्छ– म कुनै पुरुषको ठाउँमा हुन्थे भने वंश, गोत्र, थर या परिवारको मूल पद पाउने लोभमा म फस्दिनथेँ । बरु नेपाल, भारतलगायत दक्षिण एसियाली समाजले पुरुषलाई एउटा ‘अदृश्य धम्की’ मा बाँधेर राखेको गोप्य कुराको खुलासा गर्थें अनि ‘अदृश्य धम्की’ विरुद्ध बोल्ने सामथ्र्य राख्थेँ । युगौंदेखि, ‘तँ मर्द होस्, तँ पुरुष होस्, तेरो जिम्मेवारी परिवारको पालनपोषण, बिहाबारी र सुरक्षाको हो । तैंले जन्माउन लगाएको बथान अर्थात बालबच्चाको मूल संरक्षण र व्यवस्थापनको कुनै पनि कमजोरीको जिम्मेवार तँ आफैं होस्’ भन्ने अघोषित दासताविरुद्ध म आवाज उठाउँथेँ ।
‘छोरो भएर पनि हेर के लाज नभाको होला’ भन्लान् भन्ने डरले पुरुष जातिलाई आँसु लुकाउन कसले सिकायो होला ? फेरि अवस्था कस्तो छ भने श्रीमतीको तुलनामा लोग्नेले कम पढेर हुँदैन, पुरुषले महिलाले भन्दा थोरै कमाएर हुँदैन । श्रीमतीले कुनै जागिर गरेकी छन् भने इज्जत धान्नकै लागि पनि पुरुषले उनले भन्दा धेरै कमाउने जागिर खानैपर्छ, खोज्नैपर्छ । नत्र त जोइटिङ्ग्रे † यति मात्र होइन, जोइका तुलनामा पोइ होचो हुनु पनि हुँदैन । बाँसका बोटजस्ता अग्ला केटा तिनका होचा श्रीमतीका लागि सुहाउँछन् तर होचा केटालाई अग्ला महिला पटक्कै सुहाउँदैन । महिला दुब्लाउँदा नराम्रा देखिन्नन् तर पुरुषले गमक्क मोटाउनैपर्छ ।
कहिलेकाहीं मेरो मनमा लाग्छ सम्भवत: यही अदृश्य र अप्रत्यक्ष सामाजिक ‘ताप’कै कारण धेरै युवा देश छाडेर अरबको रापमा बालुवा पेल्न तयार भएका होलान् । म बारम्बार सोच्ने गर्छु, ‘साँच्चै वर्षौंदेखि पुरुषलाई खेतबारीमा जोत्ने गोरुजस्तो बनाइएको तथ्य सबै पुरुष जातिलाई थाहा होला कि नहोला ?’
हुर्कंदै गरेकी केटीलाई समाजले पराइघर जानुपर्ने कुरा सिकाउँछ, यही सवालमा हुर्कंदो पुरुषलाई भने भोलि विवाह गरेर ल्याइने उही हुर्कंदो युवतीलाई पाल्नुपर्नेदेखि नमरेसम्म उसको जिम्मा लिनुपर्ने पनि सिकाइन्छ । फेरि पनि पुरुषवर्गसँग सोध्न मन लाग्छ– किन अनेक बेहोरेर महिलालाई पाल्नेदेखि पोल्नेसम्मको जिम्मा लिन खटिन्छ पुरुष ? किन उसले नभनेको, ‘म कसैलाई पाल्न सक्तिनँ, उनी आफैंले आफंैलाई पाल्नुपर्छ ।’ प्यारा पुरुषजन, तपाईंले आफैंले आफैंलाई पाल्न सक्ने केटी खोजेमा कुनै अमुक मेसिनझैं तपाईं अहोरात्र खटिनुपर्दैनथ्यो ।
अरबको तातो बालुवा होस् वा विदेशी हिउँका सहरहरूमा खटिनुपर्दैनथ्यो । पक्कै पनि चलिरहेको संस्कारले आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक विरासत पुरुषकै हातमा कायम त गराउला तर विवाह गरेपछि ल्याइएकी श्रीमती र उनीबाट जन्मेको सन्तानलाई आफ्नो थर दिन पाउने र आफू घरमूली हुन पाउने लोभमा आफ्नो जिन्दगी नै ‘कुर्वान’ गर्नुपर्ने कुरोचाहि साँच्चै दुखिया प्रचलन हो । मेरो यो लेखको आशय अब केटा मानिसले कामकाज छाडेर ‘बिन्दास’ जिउन पाउनुपर्‍यो भन्ने हुँदै होइन । बरु के हो भने संस्कारका नाउँमा जेजति भयो, त्यो गलत भयो, अब हामीले संस्कार बदलेर महिला र पुरुषलाई समान हैसियतको बनाउन लाग्नुपर्‍यो भन्ने चाहिँ हो ।
हिजो संस्कारका नाउँमा समाजले जिउँदै महिला जलाएकै हुन् । त्यो क्रुर अत्याचारको अन्त्य पनि भएकै हो । संस्कार त समय अनुकूल परिवर्तन हुँदै जाने कुरा हो । कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने संस्कारलाई अन्त्य गरेर नयाँ संस्कार बसाउन हामीलाई केले रोक्ने ?
प्रकाशित : चैत्र २५, २०७४ ०८:४३
शिवपुरीमा 'नो सफारी’
वंशको वर्ग, नश्लको नालीबेली
रुन मन लागे पढ्नुस् गणित !
बिथोलिएको वैदेशिक रोजगारी
सम्पादकीय असार १, २०७६
सरकारले पछिल्लोपल्ट संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सँग श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपाली कामदारको हित र सुरक्षाको विषय सम्बोधन गर्ने यो प्रयासलाई खाडीका अन्य देशका...
विधेयक विवादले निम्त्याउँदो संकट
कृष्ण खनाल असार १, २०७६
संसद्को अधिवेशन चलिरहेको छ । त्यहाँ वार्षिक २०७६/७७ को बजेटलगायत नयाँ र भइरहेका कानुनमा संशोधनका लागि दर्जनौं विधेयक विचाराधीन छन् । विधेयकमा आधारित भएर कानुन बनाउनु संसदीय...
माओवादी दुर्दशाको चुरो
आहुति असार १, २०७६
गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषय, जुन आज नेपाली समाजमा राजनीतिक उपलब्धि मानिन्छन्, तिनको मुख्य स्रोत माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलन थियो । यो तथ्य सँगसँगै अपूर्ण एवम्...
कानुनी राज्यको कमेडी
सावित्री गौतम असार १, २०७६
जर्ज अर्वेलको प्रसिद्ध उपन्यास ‘एनिमल फार्म’ को एउटा लोकप्रिय हरफ छ, ‘सबै जनावर समान हुन् तर कुनैकुनै जनावर अलि बढी समान हुन्’ (पृष्ठ ८) । नेपाली...
गुठी, फोक्लोर र बहस
अभि सुवेदी जेष्ठ ३२, २०७६
नेपाली लोकवार्ता समाज/नेपाली ‘फोक्लोर सोसाइटी’को तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २०७६ जेठ ३१–३२ मा काठमाडौंमा भइरहेछ । यसमा खासै हलचल हुँदैन, किनकि यो अर्जुन अप्पादुराईको हामीले दोहोर्‍याउने गरेको...
आकाशेपानी काठमाडौंलाई काफी
विकासराज सत्याल जेष्ठ ३२, २०७६
नेपालका धेरै मानवबस्ती खानेपानीको चरम अभाव झेल्दैछन् । कति बस्ती यसैकारण बसाइँ हिँड्न थालेका छन् । बढ्दो जनसंख्याको चापले अधिकांश सहरमा खानेपानीको हाहाकार छ । ज्वलन्त उदाहरण हो, काठमाडौं...
नारायण कोजु जेष्ठ ३२, २०७६
नेपालको राजधानीसँगै जोडिएको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा जिप सफारी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन् । वातावरणविद्देखि सामान्यजनसम्म यो परियोजनाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । हुन त पर्यटन उद्योग...
रमेश घिमिरे जेष्ठ ३२, २०७६
गाँजा हरेक मानव सभ्यताको इतिहासमा उच्च महत्त्व दिइएको वनस्पति हो । तर यो निर्दोष औषधीय वनस्पति विश्व राजनीतिको भुँमरीमा परेर पीडित बन्न पुग्यो । कुनै समय गाँजा...
सम्पादकीय जेष्ठ ३१, २०७६
एउटा भनाइ छ— लन्डन नजलेसम्म बाँकी बेलायत पूरै डढे पनि कसैले वास्ता गर्दैन । हाम्रो नेपालमा पनि काठमाडौंलाई नदुखुन्जेल बाँकी मुलुकको पीडा खासै कसैले महसुस गर्दैन ।...
ओली अर्थात् अधिनायकवाद !
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम जेष्ठ ३१, २०७६
सत्ताधारी जोसुकै होस्, उसलाई सामान्यतया लोकतन्त्रका दुई आधारस्तम्भ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार प्रिय लाग्दैनन् । निरंकुश मनसुवा भएको सत्ताका लागि त झन्, त्यो चाहे निर्वाचित...